Vina momba ny Fananan-tany: Zaraina Tany 1000m² tsirairay ny Malagasy rehetra - Tanilova
vendredi, 19 janvier 2018 10:14
Terre: Tanilova, 1000 m² de terre pour Chaque Malagasy sans distinction (Projet)
Ny Tany no anisan'ny maha Malagasy ny Malagasy, ny tsirairay tsy misy ankanavaka dia tokony hanana tany ho azy, izay ho lovain'ny fara mandimby, tsy azo amidy, tsy azo zaraina.
Madagasikara dia manana velaran-tany 587 000 km² = 58 700 000Ha = 587 milliard m²
Anisan'ny fototry ny fampandrosoana ny fahaizana mitsinjara sy ny fampiasana ny tany (aménagement du territoire)
Toy izao no drafitra azo eritreretina amin'izany:
- 20% manantompo 117 400 km² = 11 740 000 ha;
- 5% fambolena efa misy = 29 350 km² = 2 935 000 Ha (3.5% fotsiny no misy fambolem-bary amin'izao);
- 15% toeram-ponenana, milieu d'habitation;
- 15% ambolena hazo sy voankazo, ahitra maitso, ala arovana;
- Ny Fambolena sy fiompiana, akarina 25%, ka ho lasa 30% miaraka amin'ilay 5% efa misy voly amin'izao;
- Tanilova, tany zaraina 5% = 29 350 km² = 2 935 000 Ha =29,35 milliard m², samy mahazo 1000m² isaky ny Malagasy;
- Tany amokarana Indostria, mine, fandraharahana ara-toekarena 5%;
- Tany kajiana ho an'ny aoriana sy ho an'ny taranaka 10%.
Raha zaraina amin'ny Malagasy 25 000 000, izay tsy maintsy manao karapanondro avokoa na zaza vao teraka aza, izay tsy andoavam-bola ny fanaovana izany, dia samy mahazo Tanilova 1000m² avokoa ny Malagasy rehetra.
Ireo tsy an'asa rehetra dia tsy maintsy miditra service national manajary ny tany, mamboly, manao lalana, sekoly, hopitaly, mampianatra, manampy ny zaza sy ny be antitra ary ireo misy kilema.
Na milaza ho tantsaha, na mpivarotra, na mpanao asa madinika sy asa tanana aza dia mila manao karatra avokoa, foana hatreo ny asa tsy misy taratasy, informel.
Izay tsy manakaratra tsy mahazo ny Tanilova.
Tohana ara-piofanana ny rehetra, indrindra ireo te amboly, hiompy, hanjono. Omena fitaovana ka atosika ny fambolena sy fiompiana lehibe, mba ampiakatra ny rendement sy ny vokatra.
Ireo teraka aty aorian'ny opération dia mandova an'ireo Ray amandreniny. Ny Tanilova, tany azo avy amin'io opération io, dia tsy mizara, ary tsy azo amidy, fa azo ampanofaina, ny hofan-tany no zarainy. Ireo Tanilova tsy miasa na tsy nisy fanorenana na fanajariana ao anatin'ny 5 taona, dia averina amin'ny fanjakana.
Ireo tany nalain'ny Colon, ka nisy fanajariana nataon'i Malagasy nandritra ny 10 taona, dia lasan'ny Malagasy na izay nanajary azy.
Jerena manokana ireo tany misy manajary nefa tsy misy taratasy misoratra aminy.
Ireo rehetra nipetraka teto Madagasikara talohan'ny 1960 sy ny taranany, ireo izay teraka rehetra teto Madagasikara dia mizaka ny Zom-pirenena Malagasy feno avokoa, tsy hijerena anarana na tavan'olona, ary mahazo mividy tany sy mahazo Tanilova 1000m² toy ny rehetra ihany koa.
Hisy opération lehibe arak'izany amin'ny fitsinjarana ny Tanilova, faritana ireo toerana honenana, nouvelle ville, ireo toerana ambolena, runch sy fiompiana lehibe, ireo toerana anaovana indostria, ireo anaovana trano azon'ny rehetra vidiana na hofaina.
Hisy loterie hamaritana ny Tanilova ho an'ny tsirairay, azo heverina ny hoe fametrahana ny faniriana 3 amin'ny faritra tiana ho azo, raha tsy misy mangataka izany, na misy fifandaminana dia lasanao io Tanilova 1000m² nirianao io.
Tsy misy vola aloha ny fahazoana sy ny taratasy rehetra amin'ny Tanilova, tsy andoavana hetra mandrakizay.
Ny famindram-panana, na tany na trano, na fiara, na fitaovana, na entana, na varotra, araky ny lova dia tsy andoavam-bola avokoa, ny tany sy trano tsy ampidiram-bola dia tsy misy hetra avokoa.
Ireo tany ambolena mampidi-bola dia raisina toy ny fitaovam-pamokarana ihany koa, tsy misy hetra tataovina aminy, fa ny vokatra amidy no misy hetra faran'izay ambany.
Ny tanjona, vahana ny olana ara-tany, adi-tany, ary samy manana Tanilova 1000m² avokoa ny Malagasy rehetra ankoatran'ny tany izay efa azy na hovidiany na ho lovainy.